Arday Kenya ku laayay arday kale - BBC News Somali
Arday Kenya ku laayay arday kale
14 Oktoobar 2017
Image caption Iskuul ka mid ah iskuullada Kenya
Ugu yaraan shan arday ah iyo nin waardiye ah ayaa arooryadii hore ee saaka toogasho lagu dilay iskuul sare oo ku yaal waqooyiga Kenya una dhaw xadka South Sudan.
Dadka goobjoogayaal ah ayaa sheegay in saddex qof oo hubaysan oo midkood uu horay iskuulka arday uga ahaa ay waabarigii weerrareen qeybta jiifka ee iskuulka sare ee AIC Lokichogio.
Maamulaha iskuulka ayaa sheegay in qofka weerrarkan hogaaminayay uu ahaa arday horay iskuulka u dhigan jiray oo reerkiisa loo diray kaddib markii uu la dagaalamay arday kale oo ay isku fasal ahaayeen.
Waxaa lagu amray inuu waalidkii keeno balse sidaasi ma uusan sameyn, taa badelkeedana, waxa ay goobjoogayaashu sheegeen in xalay saqdii dhexe kaddib uu u soo dhacay iskuulka isaga oo ay wehlinayaan laba qof oo kale.
Waxaa lagu eedeeyay raggaasi inay dileen waardiyihii kaddibna ay gudaha u galeen qeybta jiifka ee iskuulka iyagoo baadigoobaya ardaygii ay dirirtu dhexmartay ninka weerraraka horkacayay ee ay isku fasalka ahaayeen.
Ardaygaas ayaan iskuulka xilligaas ku sugnayn.
Goobjoogayaasha ayaa sheegay in dadka weerrarka soo qaaday ay dileen shan wiil, laba gabdhoodna ay kufsadeen halka 18 kale oo arday ahna ay dhaawaceen.
Laanqeyrta Cas ee Kenya ayaa sheegtay inay halkaas ka soo saareen dadkii dhaawacmay.
Degmada Lokichogio ayaa u dhaw xadadka Kenya ay la wadaagto South Sudan iyo Itoobiya, bulshooyinka reer guuraaga ah ee halkaas ku noolna waxa ay badanaa haystaan hub ay xoolahooda ku raacdaan.